ज्यो. सुवेदीले पहिला नै दुर्घटना घट्नसक्ने संकेत गरेका थिए - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ फागुन १५ गते १२:२९ मा प्रकाशित
१५ फागुन, काठमाडौं । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी बहालवाला मन्त्रीलगायतको मृत्यु भएको शोकमा देश परेको छ । कुनै अप्रत्यासित दुर्घटना हुनसक्ने संकेत चर्चित ज्यो. दीपक सुवेदीले डेढदुई महिना अघि नै गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूज टिम अघि लेख्दछ– कुरा लगभग डेढ दुईमहिना अघिको हो । जतिबेला कुनै स्वघोषित ज्योतिषीले समाजमा ज्योतिष आतंक बच्चाइरहेका थिए । माघ फागुनमा काठमाडौंको एयरपोर्ट क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने आतंक मच्चिरहेको थियो । मान्छेको अनुहार हेरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टि गर्ने लगायतका हल्लाबाजी थियो । पछि ती ज्योतिषीले रवि लामिछानेको विवाह हुँदैन भनेकोमा रविले लगत्तै अदालतमार्फत विवाह गरे । समाजमा ज्योतिष विषयलाई लिएर अन्यौल सृजना भइसकेको थियो ।